Viga mafaera mukati memufananidzo kubva kune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuvanza mafaera mukati memufananidzo muLinux
Nharembozha, kunyanya mafoni, chimwe chinhu chakavanzika kupfuura makomputa ayo atinowanzo govana nemhuri. Kuvanzika kwakakosha uye panogara paine mukana wekuti isu tinoda kuchengetedza chimwe chinhu chatisingade kuti chero mumwe munhu aone. Pane zvakawanda zvingasarudzwa kuti zviitwe izvi, sekugadzira yakamanikidzwa faira ine password, asi nenzira iyi tiri kureva kuti tine chekuvanza, chiri chokwadi. Kana isu tichida kuviga chimwe chinhu uye hapana anoziva kuti tiri kuchivanza, tinogona nguva dzose viga mafaera mukati memufananidzo.
Izvi zvinogoneka nekuda kwa rairo rekupedzisira rekupedzisira. Izvo uye kutora matanho akakodzera nenzira kwayo. Zvatichaita ndezvekugadzira yakadzvanywa faira ine thumbnail mune iyo maneja faira iri mufananidzo, iyo yatinogona kunyange kuvhura senge chero imwe. Chinhu chega chinogona kuita kuti "vapambi" vafungire ndechekuti tinoisa magigabytes mazhinji mumufananidzo, asi izvo zvatova kune mumwe nemumwe wedu. Pano isu ticha tsanangura maitiro.
1 Viga mafaera mumufananidzo unoshanda zvizere
2 Steganography, viga faira mukati mevamwe
Viga mafaera mumufananidzo unoshanda zvizere
Tisati tajekesa nhanho dzekutevera, isu tichataura zvatichaita: tichaenda kutora dhairekitori, mune yangu Chakavanzika Folda, inova iyo ichave iine mafaera ese, tiri kuzomanikidza said folda uye gadzira iyo faira FolderSecreta.zip, isai iyo kumufananidzo daidza Image.png inozove "yekuzvivanza" kana "yekuvhara" uye gadzira iyo faira inongoratidzira mufananidzo mumwe chete asi ichave nemafaira ese mukati, ayo kwandiri anga ari Capture.png. Matanho ekutevera angave anotevera:
Isu tinoisa iwo mufananidzo uye dhairekitori iyo yatinoda kuviga (FolderSecreta) mukati meiyo yakafanana folda, chero iri. Semuenzaniso, muMagwaro.
Kana tisina kuzviita kare, tinoisa mafaera ese atinoda kuvanza muFoldSecreta. Ini ndabvisa iyo nzvimbo muzita refaira kuitira kuti zvinhu zvive nyore mune inoteedzera.
Isu tinomanikidza dhairekitori. Tinogona kuita izvi nekudzvanya kurudyi uye nekushandisa yedu default compressor.
Isu tinovhura iyo terminal.
Isu tinoenda kune dhairekitori uko FolderSecreta.zip uye Imagen.png vari pamwechete, mune yangu murairo unenge cd / imba / pablinux / Desktop.
Nhanho inotevera ndeye "concatenate" iyo ChakavanzikaFolder.zip uye Image.png mafaera muCapture.png faira rekubuda. Iwo wekuraira wemuenzaniso wangu ungave unotevera:
Chekupedzisira, tinogona kudzima mafaera ese, kunze kwe "Capture.png" ndipo panowanikwa data rese rakavanzika, asi kwete usati watarisa kuti tinogona kurisvinura sezvatichazotsanangura mushure.
Esteganography, viga faira mukati mevamwe
Iye zvino unogona kuita bvunzo: kana isu tikazarura mufananidzo, chirongwa chinoivhura chichatiudza kuti chine huremu hwakajairika, senge kubatwa kwe2mb senge yandakashandisa, asi nekudzvanya kurudyi pamufananidzo uye kupinda mukati mayo properties, tichaona kuti saizi yakati kurei. TO Maitiro aya, viga mafaira mukati mevamwe, inonzi Steganography, Chii "kudzidza uye mashandisirwo ehunyanzvi anotendera kuviga mameseji kana zvinhu, mukati mevamwe, zvinonzi vatakuri, kutumirwa uye kuti chokwadi chisanzwisisike. Ndokunge, inoedza kuviga meseji mukati mezvimwe zvinhu uye nenzira iyi inogadzira chiteshi chakavanzika chekutaurirana, kuitira kuti chiitiko chekutaurirana pachacho chiende chisingaonekwe nevanoona vane mukana weiyo chiteshi.".
Para unzip iyo faira ichangobva kugadzirwa, hazvina kukwana kuti uzarure neapplication kuti usvinure, haina kana kukosha kuti uchinje kuwedzerwa ku .zip uye kuyedza kuisunungura. Tichafanirwa kushandisa mumwe murairo, uyu uri nyore kuyeuka. Panyaya yemuenzaniso wangu, iwo murairo unenge uri:
Chinhu chega chatinozoona mushure mekutsikirira Enter ndechekuti dhairekitori ratakanga tamanikidza padanho re3 rinowoneka.Patinozoona chimwe chinhu chichava mune chinouraya, icho kwandiri chinoratidza chimwe chinhu seinotevera:
pablinux @ k1904: ~ / Desktop $ unzip Capture.png
yambiro [Capture.png]: 703579 mamwe mabheti pakutanga kana mukati me zipfile
(kuyedza kuita zvakadaro)
kugadzira: ChakavanzikaFolder /
kufufutirwa: FolderSecreta / Magnifier.png
kufufutira: FolderSecreta / Pablinux.jpg
kugadzira: FolderSecreta / Disco-Dingo_WP_4096x2304 /
inflating: FolderSecreta / Disco-Dingo_WP_4096x2304 / Disco-Dingo_WP_4096x2304.png
Tsananguro iri munyaya ino yakubatsira here? Uye ikozvino, ndiudze: iwe uchaviga chii paPC yako? Kana zvirinani usandiudze ...
rm: sei kudzima mafaera nemaforodha neiyi Terminal rairo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuvanza mafaera mukati memufananidzo muLinux
Crypto inokosheswa, sezviri pachena ...
Kunze kwedambudziko iro vanofarira zvemakomputa vanogona kukupinza mairi, kana vawana chimwe chinhu chitsva vanotofunga kuti chitsva votanga kunyora nezvacho vasina kana kuratidza zvavari kutaura.
«Takamanikidza folda. Tinogona kuita izvi nekudzvanya kurudyi uye nekushandisa yedu default compressor. Kana tichida, tinogona kuisa password pairi. »
Saka kana tichida tinogona kuisa password, zvichave kana isu tichida kurasikirwa neyedu yakakosha data kana isu tikaisa password, nekuti muchinyorwa chake haatsanangure maitiro ekutarisana nemamiriro aya.
Ndinoona zvinotyisa kuti vanhu vasingazive nezvemakomputa vanogona kurasikirwa neruzivo rwavanoda kuviga nekutevera mumakwara emumwe anofarira zvemakomputa asingatomboedze zvaanonyora.
Pablinux anoverenga zvishoma nezve katsi kuraira kana mumwe mushandisi akafunga kuseta password ku zip yake uyezve anobva ashamisika zvakashata paanoburitsa zip ndokuona kuti maforodha ese haana chinhu, kana paine. Uye ingo tora kubuda kubuda.
Adrian Aceituno akadaro
Ko kana iwe ukaedza unzip -P?
Pindura Adrián Aceituno
Iwe unowana zvakafanana "kusvetuka" mhedzisiro, saka kana iwe wakashandisa nzira iyi ne password uye wabvisa mafaera ekutanga, unenge uri mune kushamisika kusingafadzi, nekuti zvinoratidza kuti iwe unogona kuseta password asi kwete maitiro ekuita neizvi mamiriro.
Zvakanaka, ndaizviziva muWindows nekopi yemabhinari. Ini ndinoda syntax zvirinani paLinux.
Vaviri vakabuda akadaro
Ndanga ndichiita izvozvo kwemakore muWindows, nekuda kwekuti iyo email yebasa inovhara maemail ane Zip zvinamatira asi haitaure chero chinhu nezvePNG.
Dzvanya Zip, kubva kuDOS / CMD kopi / b mufananidzo.png + thing.zip
Wobva watumidza zita rekuti PNG kuZip uye kubvisa nechinhu chero chakakomba (7zip, bandizip, WinRAR, WinZip ...)
Uye mapassword anogona kushandiswa kana cal.
PS: iyi haisi steganography. Pinda iyo info 3n iwo mapikisheni ari (semuenzaniso, yekupedzisira bit yeimwe pixel kana zvakadaro)
Pindura Par salian
Dropbox inoshandura kodhi kuyambuka-chikuva uchishandisa C ++
Kuuraya zombies dzinogara paLinux yako ...